Gbasara Anyị - Tianjin TheOne Metal Products Co., Ltd.
Tianjin TheOne Metal Products Co., Ltd. nke di na Ziya Recycled Economic Industrial Zone, nke ebidobere ya na Ọkt, 2008, wee malite imeghe ahịa ụlọ site n'aka ndị ahịa na ndị ahịa.
Site na afọ 2010, anyị mepụtara ahịa ndị si mba ofesi, n'otu oge ahụ anyị guzobere otu azụmaahịa azụmaahịa mba ofesi.
N’afọ 2013, anyị sonyere na Canton Fair na nke mbụ, wee gaa n’ihu ịgbatị ndị otu anyị.
N'afọ 2015, bidoro isonye na ihe ngosi mba ofesi gosipụtara.
N'afọ 2017, zara iwu gbasara nchekwa obodo,
Anyị kwagara National Recycled Economic Industrial Park --- Ziya Industrial Park. N'otu oge ahụ anyị welitere ma rụkwaa ụlọ ọrụ ochie iji mepụta ọnụ.
Maka imepụta, anyị emelitere akụrụngwa, gbanwere site na usoro ọdịnala na-agafe agafe na-aga na ngwaọrụ jikọrọ ọnụ, ọ meziri ka ọ rụọ ọrụ nke ọma.
Maka njikwa dị mma, ụlọ ọrụ ahụ na-agbaso sistemụ nyocha kpamkpam, a ga-enyocha ya na akụrụngwa anụ ahụ na ihe mejupụtara kemịkalụ ngwa ngwa ngwa ahịa banye; na usoro mmepụta, onye ọrụ nyocha ga-eme nyocha na-ezighi ezi na nyocha ntụpọ; ga-anwale ngwaahịa ndị emechara, see foto ma tinye ya na nyocha nke QC tupu nnyefe. Iji hụ na ngwaahịa dị mma, na-ekwe nkwa ikike na ọdịmma ndị ahịa.
N’afọ 2019, iji wee nwekwuo usoro ahịa, ụlọ ọrụ ahụ na-ewusi njikwa ike, bido imepụta njikwa njirimara na arụmọrụ, mezue akara azụmaahịa ụlọ na esenidụt, inweta Asambodo Ọkwa ISO9001 na Asambodo CE.
Maka nlekọta ndị ọrụ, anyị na-ewere "ezinụlọ" dị ka ntọala, ọ bụghị naanị na-atụle onye ahịa ọ bụla dị ka nwanne, kamakwa na-etinye ndị "ezinụlọ" n'ọrụ na-ekesa ọdịmma ụbọchị ezumike, ọzụzụ dị iche iche, hazie ndị ọrụ na-eme njem, egwuregwu, ka ndị ọrụ nwere ike ịnwe obi ụtọ ịrụ ọrụ, gosipụta echiche onye ọrụ ọ bụla nwere, nwe ụlọ ọrụ ahụ n'ezie dị ka ezinụlọ.
Maka ndị ahịa, anyị na-agbaso ụkpụrụ mgbe niile nke "ịdị mma ntọala ahụ, na-akpọ aha mkpa, ọrụ kacha mma, ndị ahịa onye mbụ". N'ime mmepe afọ iri na abụọ, anyị agbakwunyere na nkà ihe ọmụma azụmaahịa nke "ngwaahịa ọhụrụ na-aga n'ihu, na-ejikọ ngwaahịa ochie maka ndọghachi ọnụ". Abtọpụ ahịa dị adị, ma n'otu oge ahụ anyị na-aga n'ihu na-etowanye ike.
Site na asọmpi dị egwu na-arịwanye elu na ahịa ụlọ na nke mba ọzọ, anyị na-echekwa nrụgide na nsogbu site n'akụkụ niile, mana anyị na-elekwasị anya mgbe niile na ọdịbendị "ụlọ" ma melite usoro mmepụta na ogo ngwaahịa na-aga n'ihu.we kwenyere na anyị ga-aga aka nyere ndị ahịa anyị ọhụụ n'ọdịnihu, izute ndị enyi ọhụrụ ma nweta nkwado gị.
Tianjin TheOne Metal Products Co., Ltd. Ndị otu niile, anabatakwa gị n ’ụlọ”.